Webtrends iyi: Ngosiputa oge na ichota | Martech Zone
Nzukọ Webtrends 'kwa afọ, -arụ, gụchara ma ha kwupụtara ụfọdụ nkwalite na-akpali akpali na ngwanrọ ha dị ka ọrụ (SaaS) nchịkọta àjà Webtrends iyi.
Webtrends iyiNa-enye nkọwa zuru oke nke ndị ọbịa na-egosi ihe onye ahịa ọ bụla na-eme na nnọkọ ha ugbu a. Ọ na-enye usoro ihe omume mere ka onye ahịa rute ebe ha nọ ugbu a dị ka ọ na-eme, na-enye ndị ahịa ohere ikpebi ngwaahịa ndị onye ọrụ zụtara ma ọ bụ lee anya na mbụ, ma ọ bụ ụzọ esie tupu emee ihe ikpeazụ. Ọ na-enyekwa ozi nchịkọta dị elu bara uru na Stream gụnyere ọnụ ọgụgụ nke echiche ngwaahịa, ihe omume, ịzụrụ ihe na ọnọdụ ịhapụ onye ụfọdụ gbasara nnọkọ ahụ. Steve Earl, Webtrends Director nke Ahịa Ahịa.
Webtrends iyi bụ ngwaahịa na - enweghị ihe ọ bụla - enwere ike iji ya mebie ya nchịkọta ikpo okwu tinyere Webtrends, n'ezie.
Enwere isi ihe ngosi nke 4 nke ndị na-ere ahịa nwere ike iji nyere aka chọpụta, na ezigbo oge, otu esi elekwasị anya na saịtị ahụ.
Okporo ụzọ Seismograph
Nọgidenụ na-egosi otu ndị ahịa si abịa na saịtị gị na ihe ha na-achọ ozugbo ha ruru ebe ahụ.
Nlele Mgbasa Ozi
Kwado nghọta ozugbo ebe ndị ahịa na-abịa ma na-aga maka ibe ibe na saịtị ahụ. Nke a bụ nghọta maka ihu ahịa peeji nke ma ọ bụ iji tụọ otu peeji ọdịda nke mkpọsa na-arụ.
Ele Arụ Ọrụ Global
Nweta nghọta dị omimi banyere ọnọdụ ndị ọbịa gị na otu ha si abanye na saịtị gị. Lelee ya ka ọ dị ka ndị ahịa na-abanye na saịtị gị.
Lelee ihe ndị ọbịa gị na-agụ ugbu a na ụdị ụdị ngwaọrụ.
Ihe data ejidere abụghị naanị maka ịhụ anya, n'agbanyeghị. A na-ejide data mmemme ma zigara ya na ihe nkesa nchịkọta gụgharia (SCS). Igwe na-arụ ọrụ nhazi dị elu na-enyocha ma na-eme ka data ihe omume ahụ dị na sekọnd atọ ma ọ bụ obere. A na-eme ka data ahụ nweta otu API na usoro JSON, enwere ike iwesa ya site na ngwa ma ọ bụ nhụcha anya site na njikọ njikọ weebụ yana Webtrends Streams API.
Ọzọkwa, retargeting enwere ike ugbu a na Webtrends Streams maka Nzaghachi. Usoro a nwere ike belata windo oge maka ma melite ihe ịga nke ọma nke ihe ịga nke ọma maka ndị na-ere ahịa n'ihe gbasara mmemme ịgbahapụ na ntanetị, dịka ụgbọ ahịa ịzụ ahịa, nlele ngwaahịa na ịhapụ ihe nchọgharị.
Nnọkọ Na-asọba data n'ime Webtrends Na-ebuli mmelite onsite na nyocha, na-enye ndị na-ere ahịa ikike ịkwado ozi oge ọbịbịa na-eme ka mmụba nke ahụmịhe ndị ahịa na-abawanye, nke ga-emecha mee ka ọnụego ntụgharị ka ukwuu Chee echiche oge zuru oge na ezigbo oge!
Tags: nchịkọta apiAPInzaghachiretargetingseismographstreamiyianyawebụsaịtịiyi webtrends
Otu Anyị Si Ebe Oge Peeji Anyị Iri site na Sekọnd 10